पञ्‍चले गाउँघरमै जबरजस्ती मिलाउँछन् बलात्कारका घटना ! पञ्‍चविरुद्ध ‘अपरेसन’मा प्रहरी:: Naya Nepal
पञ्‍चले गाउँघरमै जबरजस्ती मिलाउँछन् बलात्कारका घटना ! पञ्‍चविरुद्ध ‘अपरेसन’मा प्रहरी
काठमाडौं । सप्तरी डाक्नेश्‍वरी ७ की संगीता मण्डल भदौ २९ गते घाँस काट्न गएका बेला गाउँकै दुई जनाबाट बलात्कृत भइन् । स्थानीय १८ वर्षीय रञ्‍जित मण्डल र १९ वर्षीय बब्लु मण्डलले संगीतामाथि बलात्कार गरे ।
संगीता न्याय चाहन्थिन् । तर बलात्कारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो पञ्‍चहरुले गाउँमै पीडितकी आमालाई २५ हजार रुपैयाँ दिने भन्दै फैसला सुनाए । संगीताले सोही राति घरभित्रै झुन्‍डिएर आत्महत्या गरिन् । घटनामा जबरजस्ती मिलापत्र गर्ने पञ्‍च र बलात्कारमा संग्लनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । संगीताले आत्महत्या गरेपछि घटना बाहिर आयो । प्रहरीले ७२ घण्टाभित्र अभियुक्तलाई पक्राउ गर्‍यो ।
यस्तै सिरहाको विष्णुपुर १ मा स्थानीय २० वर्षीय मुकेशकुमार सिहंले गाउँकै १६ वर्षीया किशोरीलाई असोज १२ गते बलात्कार गरे । प्रहरीमा दर्ता हुनुपर्ने बलात्कारको मुद्दा पञ्‍चायतीले गाउँमै मिल्न दबाब दिए । पाँच लाखमा बलात्कार घटनाको मिलापत्र गराएको लिखित तमसुकसहित पीडक र आठजना पञ्‍चहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।
पक्राउ पर्ने पञ्‍चहरु सिंहेश्वर साह, अरविन्दकुमार साह, शत्रुधन साह, राजकुमार साह, रामउदर यादव, जगवीर यादव, राजकुमार यादव र श्यामसुन्दर यादव छन् । प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले मिल्न दबाब दिने पञ्‍चलाई मतियारका रुपमा पक्राउ गरिएको बताए । बलात्कारको घटना मिलाउन पञ्‍चहरुले रकम दिने नक्कली ऋणी र धनीसमेत खडा गरेको पाइएको छ ।
भदौ १ मा धनुषामा एकजनाले बलात्कारको मुद्दामा मिल्न दबाब दिए । पछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै बलात्कारजस्तो जघन्य तीन घटनामा पञ्‍चको मिलापत्र गराउन दबाब दिएको तथ्य देखियो ।
प्रदेश नम्बर २ का कतिपय जिल्लामा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने जघन्य अपराधमा मुद्दामा पनि गाउँमै जबरजस्ती मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति वर्षौंदेखि देखिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार मधेसमा गाउँका मान्यजनलाई पञ्‍च र उनीहरुको अगुवाइमा हुने छलफललाई पञ्‍चायती सभा भनिँदै आएको छ । पञ्‍चको आदेशलाई कानुनकै रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत सिर्जना गरिँदै आएको पाइएको छ ।
प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी सिंह फौजदारी प्रकृतिका हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा समेत पञ्‍चायती गरेर मिलाउन खोज्‍न अपराध भएको बताउँछन् । उनले भने, “जनचेतनाको अभावले पनि कतिपयले पञ्‍च र पञ्‍चायतीको आदेश मानिरहेको पाइएको छ । कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्ने घटनालाई मिल्नु वा मिलाइनु अपराध हो । यसविरुद्ध हामीले अपरेसन नै चलाएका छौं । यसविरुद्ध नागरिक र प्रहरीबिच सहकार्य जरुरी छ ।”
मधेसका जिल्लाहरुमा लेनदेन, कुलो,पारिवारिक झगडा पनि पञ्‍चले मिलाउँदै आएका छन् । डीआईजी सिंह भन्छन्, “कतिपय अवस्थामा गाउँका ठूलावडा भनिएकाहरुले निम्‍न वर्गमाथि पञ्‍चकै प्रयोग गरेर अन्याय गरेको पनि पाइएको छ । कानुनी राज्यमा पञ्‍चले अपराधका मुद्दाको छिनोफानो गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्यमा संग्लनविरुद्ध हामी कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन्छौं ।”
अर्कातिर विकास–निर्माणका काममा सीधै राज्यको ढुकुटी उपभोक्ता समितिलाई थमाउनु व्यावहारिक मान्ने कि कानुनी ? जे माने पनि फितलोचाहिँ देखिन्छ । ठोस विकासमा भन्दा आसेपासे रिझाउने, कार्यकर्ता पोस्ने र गरिखान मेलोमेसो मिलाउने कामलाई व्यावहारिक मान्ने ? सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीलगायतका अन्य कानुनी दस्तावेजहरूले त्यसरी काम गर्न, गराउन प्रवेशद्वार खुला राखेकाले किन कानुनी नभन्ने ? महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग एक आर्थिक वर्षमा बर्सेनि केही लाखको संख्यामा बन्ने त्यस्ता उपभोक्ता समितिले कति बजेट बर्सेनि चलाउँछन्, तिनले चलाउँदै आएको बजेटको घट्ने वा बढ्ने प्रवृत्ति के छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन ।जनसहभागिताबाट काम गराउने भने पनि कामजति मेसिनले गरेर डोरहाजिरीमा चाहिँ मानिसले गरेको देखाउने, लागत सहभागिताको नाममा नक्कली कागजात बनाउने गरेको पाइन्छ । उता यी सबै गर्न, गराउन कर्मचारी सहयोगी बनिदिन्छन् । जटिल प्रकृतिको काम उपभोक्तालाई दिएर निर्माण व्यवसायी वा मेसिन, औजार भाडामा दिने, ठेक्कामा लगाउने कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट भएको देखिन्छ । यो काम कानुनको नजरमा सर्वथा गलत भए पनि आजसम्म कहींकतै उजुरी नभएको हुँदा कोहीकसैलाई कारबाही भएको अभिलेख कुनै निकायमा छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चाहिँ अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिले काम लिएर ठेकेदारलाई काम दिएको बारे उजुरी नआएकाले कारबाही गर्न नसकेको बताउँछ । पहाडहरू फोड्ने अधिकांश काम उपभोक्ता समितिले नै गरेका हुन् । पहाड फोड्दाको विनाशले जलवायुमा प्रतिकूल प्रभाव ल्याएको छ भने बर्सेनि दैवीप्रकोपका घटना पनि वृद्धि भएको छ । पहाड फोडेर भएको आर्थिक लाभको तुलनामा धनजनको क्षति धेरै रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेता, सांसद, मन्त्री र यदाकदा कर्मचारीहरूसमेतले लबिङ गरेर टोले विकासका देखि ससाना विकास निर्माणका काममा बजेट दिने प्रवृत्ति पनि छ । अनि मैले दिएको, ल्याएको बजेट भनेर आत्मप्रचार गर्ने वा प्रचारकहरूलाई भजनकीर्तन गर्न लगाएर राजनीतिक लाभ लिने र अन्त्यमा नाजायज आर्थिक लाभ पनि लिनेहरू ७ सय ६१ सरकारको छत्रछायामा हुर्कि-बढिरहेका छन् । यो कुलत बनिसकेकाले रोक्न अनिवार्य छ । यो सबैले भोग्दै आएकै खुलागोप्य तथ्य भनेजस्तो छ ।
रकमकलम समाउने, दामकाम गर्ने अख्तियार प्राप्त पद वा व्यक्तिले जहिले पनि बजेट दुरुपयोग गर्न तत्परता देखाउने, सेटिङ मिलाउने वा चलखेलको जुक्ति अपनाइरहने चाहिँ बजेटको दुर्गणै हो कि के हो कुन्नि ? नाथे उपभोक्ता समितिमा बस्ने औंठाछाप लगाउने, अपढित, निरक्षर, अतालिमी, सरकारी रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान, सीप नभएका कोरा मानिसका त के कुरा, पढेलेखेका, देशविदेश घुमेका, तालिमैतालिम र वृत्ति विकासले थिचिएका उच्च पदस्थ नेता, मन्त्री र कर्मचारी नै भ्रष्टाचारी जो छन् ।उपभोक्ता समिति खराबै हुन्छन् भनेर प्रमाणित गराउनु मेरो आशय बिल्कुलै होइन । अमानतमा उपभोक्ता समितिबाट गोरखाको मनकामना मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएको कार्य एक अब्बल उदाहरण हो । यस्ता उदाहरणहरू अन्यत्र पनि हुन सक्छन् । त्यहाँका असल सूत्रलाई बर्सेनि हजारौंका संख्यामा बन्ने पटके र स्थायी प्रकृतिका उपभोक्ता समिति÷समूहले किन सिको नगर्ने ? तिनका असल सिकाइको स्थानान्तरण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । उता नेपालमा उपभोक्ता समूहमा बसेर राजनीतिमा कोल्टे फेर्नेहरू औंलामा गन्न सकिने नामहरू छन् । यसरी नेतृत्वमा उदाएकाहरूले उपभोक्ता समितिको एकीकृत र साझा कानुनका लागि आवाज निकाल्नुपर्छ । यस्तै यदि म गलत छैन भने नेपालमा वन उपभोक्ता समूहसम्बन्धी अध्ययनको निष्कर्ष विश्वव्यापी पुरस्कृत हुनु पनि गर्विलो पक्ष हो ।
अदुअआ, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयहरूले उपभोक्ता समितिद्वारा सम्पादित कामको दोष वा खोट पहिचान गर्ने, औंल्याउने गर्दै आए पनि नियमनकारी निकायबाट ठोस रूपमा नियमन नहुने, दोष औंल्याइएअनुसार सुुधार नगर्ने हो भने उपभोक्ता समिति दलका कार्यकर्ताहरूका लागि दुहुनो गाई बनिरहने देखिन्छ । ती निकायले सरकारलाई सुझाव दिइरहने तर ती सुझावहरू कहिल्यै पनि कार्यान्वयन नहुने भने उपभोक्ता समितिका गलत रवैया कहिल्यै पनि रोकिँदैन । महालेखा परीक्षकले नीतिगत सुधारमा नै जोड दिए पनि अझै पनि त्यस्तो सुधारका पक्षहरू सार्वजनिक हुन सकेको छैन । चालू आवको बजेट कार्यान्वयनसँगै नीतिगत पक्षमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।उपभोक्ताहरू समितिमा बस्नेहरूलाई कानुन आकर्षित नहुने, काम गर्ने प्रणाली नजान्दा भएका भूलचुकलाई माफीमिनाफा गर्ने सोच हो भने पनि सम्बद्ध निकायले त्यही भन्न सक्नुप-यो कि उपभोक्ता समितिमा बस्ने हाम्रा कार्यकर्ताको संरक्षण गर्छौं–गर्छौं । नत्र त उपभोक्ता समितिको नाममा बर्सेनि लुट मच्चिरहँदा पनि विधायकहरू किन कानमा तेल हालेर बसेका छन् ? कर्मचारी संयन्त्रले किन नियमन गर्न सक्दैन ? कारबाहीको दायरामा किन ल्याउन सक्दैन ? जबसम्म उपभोक्ता समितिमा बसेर लुट मच्चाउनेहरूलाई कारबाही हुँदैन तबसम्म जनताले तिरेको करमा दलका मुठ्ठीभर कार्यकर्ताको रजाइँ चलिरहन्छ ।